Private room Ame Tauna @Pandora
Ikamelo e-indlwana ibungazwe ngu-Alejandro
U-Alejandro unokuphawula okungu-22 kwezinye izindawo.
I-Private Nature Reserve emgwaqeni onomfudlana nehlathi lemvelo. Woza uzojabulela indawo eyanele yokuhamba, uphumule futhi uphumule emvelweni eseduze ne-Amboró National Park. I-62km nje (1h 15min) ukusuka edolobheni laseSanta Cruz de la Sierra, ilungele ukuthatha uhambo oluya ezindaweni zezivakashi endaweni: Rio Piraí, Samaipata, Cuevas, El Fuerte, Laguna Volcán, nezinye. Imibhangqwana, abathanda uhambo, imindeni (enezingane) kanye nezilwane ezifuywayo zamukelekile. Woza uzobuyisa amandla akho abalulekile!
Ikhabethe elincane elinophahla oluphezulu oluyisicaba nomqondo ovulekile. Igumbi langasese elinegumbi lokugezela elihlanganyelwe. Igumbi lokuhlala elivulekile, indawo yokosa inyama nezindawo ezanele zokuphumela ngaphandle.
Kuhle ukwabelana nomndeni kanye nabahambi abahamba ngabodwana abafuna ukugeza ngemvelo nokuthula.
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-22 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
I-PANDORA itholakala kuthelawayeka, ngokobuchwepheshe phakathi kwe-Santa Cruz de la Sierra neSamaipata. Ukutholakala kwezitolo nebhange e-La Angostura (2 km). Njengoba isezintabeni zokuqala zezintaba, ithola umthunzi omningi phakathi nenkathi eshisayo.
Abasebenzi bosekelo bendawo (2 km) bayatholakala ukuze bakusize ukusuka edolobheni lase-La Angostura nasedolobheni lase-Santa Cruz de la Sierra